Fanontaniana 7 tokony hapetraka mba hahafantarana olona iray - Fifandraisana
Ny fihaonana amin'ny olona vaovao manana traikefa samihafa mandritra ny androm-piainany dia fanantenana mahafinaritra.
Mazava ho azy fa tsy maintsy mamaky làlana mamaky ny ala mikitroka kely isika aloha rehefa mametraka rapport.
Vantany vao vita izany, inona avy ireo fanontaniana tsara vitsivitsy hahafantarana olona iray?
Aorian'ny nametrahantsika fisakaizana ankapobe, ahoana no tena ahatongavantsika amin'ny nofon'iza amin'ity olona vaovao ity?
Ny fomba mahomby handinihana ny mpiara-miasa dia ny fametrahana fanontaniana izay hanampy anao hahita ny fiainan'io olona io sy ny zavatra niainany tamin'ny alàlan'ny masony.
ny vadiko dia eo amin'ny telefaoniny foana
Misy tsipika ahodin-tanana izay mety ho an'ny tena manokana ny fanontaniana. Sarotra ihany ny mahita an'io tsipika io, fa mety amin'ny toerana samihafa arakaraka ny haavon'ny olona ampahafantarinao azy.
Ny tanjona dia ny hitady fanontaniana izay hanampy ny olona hisokatra, fa tsy hiditra amin'ny lohahevitra mamaivay - toy ny politika, ny fivavahana ary ny vola.
Ireto misy sosokevitra vitsivitsy momba ny fanontaniana izay mety ho lakilen'ny famahana ny resadresaka lalindalina kokoa.
Ny teny hoe 'maninona' dia fomba tsotra sy mora hanombohana maka fitsirihana etsy ambany.
Ny resadresaka dia azo tohizina sy dinihina amin'ny alàlan'ny fanontaniany hoe maninona ny olona iray no mahatsapa ny fomba fanaony momba ny hevitra na ny lohahevitra ifanakalozan-kevitra.
Fa maninona no io no boky tianao indrindra? Fa maninona no tianao be io hira io? Fa maninona ianao no Major amin'ny lohahevitra manokana? Fa maninona ianao no nanapa-kevitra ny hianatra any ivelany?
Ny 'antony' apetraka tsara dia afaka mitazona mora foana ny fiaraha-monina na manomboka ny resaka maty.
Manome fanontaniana be dia be hahafantarana olona amin'ny taratasy telo, mora tadidy.
Mitadiava fomba tsotra hanontaniana fanontaniana iray mifandraika.
2. Inona no hitanao fa mahaliana?
Tia miresaka momba ny tenany ny olona amin'ny ankapobeny.
Tsy ny rehetra no mieritreritra anao. Ny olona sasany miady amin'ny olana amin'ny fiaraha-monina izay manahirana azy ireo ny mahazo aina sy misokatra amin'ny resaka.
Fanontaniana iray toy ny, 'inona no hitanao fa mahaliana?' manome varavarana misokatra ho an'ilay olona hisento momba ny lohahevitra iray izay ankafizin'izy ireo.
Ny zavatra lehibe amin'ity fanontaniana ity dia ny fahafahanao mijery ny fahalalana sy ny zavatra niainan'ny namana vaovao.
Samy manana adiny efatra amby roapolo mitovy amin'ny androntsika rehetra isika. Isika rehetra dia tsy afaka mivoaka mifehy ny zavatra rehetra tokony ho fantatra. Ny fahafaha-miditra sy mankasitraka ny fitiavan'ny olona iray hafa dia afaka manokatra varavarana hahaliana sy fomba fijery vaovao izay mety tsy niainanao raha tsy izany.
3. Inona no tena sarobidy aminao?
Ny olona iray androany dia ny fitambaran'ny zavatra niainany sy ny fomba fijeriny ny fiainana.
Ny fahafantarana ny zavatra lanjain'ny olona indrindra amin'ny fiainana dia afaka manolotra fahitana momba ny karazan'olona manao ahoana ary manitatra ny halehiben'ny resaka.
Ilay olona manome lanja ny famakiana na ny fanabeazana dia mety mankasitraka ny fananana fahalalana be dia be avy amin'ny akademika.
Angamba izy ireo manome lanja ny fitiavana sy fankasitrahana fiainana an-trano milamina miaraka amin'ny fianakaviany.
Na angamba asa fivelomana izy ireo ary manome lanja ireo zava-bita matihanina alohan'ny zavatra hafa rehetra.
Tsy misy valiny diso, ary fanontaniana lehibe ny hahafantarana olona satria azonao atao ny manaraka azy io amin'ny hoe, 'Fa maninona ianao no manome lanja azy io?'
4. Inona no hitanao fa manome aingam-panahy?
Zavatra mahavariana ny mahita izay manosika ny olona hanao zavatra izay ataony.
Hanao ezaka be ny olona noho izay re ao an-tsainy sy manentana ny fanahin'izy ireo. Mety ho aingam-panahy lehibe izany na mety ho kely sy mangina.
rahoviana ny vanim-potoana 3 an'ny amerikana rehetra
Ny zava-dehibe tokony hotadidina dia ny fitondrana ny aingam-panahin'io olona io ho zava-dehibe - satria izany!
Na dia toa adaladala na mampihomehy aza dia mazava ho azy fa manan-danja io olona io.
Matetika ny olona dia manantena fanambarana lehibe rehefa miresaka zavatra toa ny aingam-panahy, saingy indraindray mangina ny aingam-panahy.
Mety hangina na mitokana toy ny maniry ho tsara kokoa ho an'ny tena na ny fianakaviana.
Angamba mahita olona manao tsara izy ireo ary mieritreritra hoe: “vitako koa izany.”
Angamba sombin-kanto io, fitiavan'ny hafa, na fihetsika tsotra feno hatsaram-panahy.
Torohevitra 18 lehibe momba ny daty voalohany aorian'ny fihaonana amin'ny olona an-tserasera
Ahoana no fomba mahaliana: 13 Tsy misy toro-hevitra tsy misy dikany!
5. Manana tanjona na nofinofy lavitra ve ianao?
Ny mpandinika mialoha dia vondron'olona mahaliana miaraka.
Matetika izy ireo mieritreritra amin'ny fomba mivelatra, manadihady ny lalany, ary mamaky làlana mankamin'ny traikefa vaovao sy mahaliana.
Ny fanehoana fahalianana amin'ny tanjon'ny olona iray sy ny nofinofiny dia manome azy ireo fotoana hizarana sombin-javatra tsy dia zahana matetika.
Voalaza fa tsy ny olon-drehetra no tariby toy izany.
Indraindray ny olona iray dia mety sahirana mamaky ny tontolo andro, amin'ny fotoana hafa dia mety ho faly fotsiny amin'ny fomba fiainany ankehitriny izy ireo ary maniry ny hitazona izay ananany ankehitriny.
Mitaky ny karazany isan-karazany mba hitazomana an'izao tontolo izao hanaraka izany rehetra izany.
6. Inona no mitondra anao fiadanam-po na fifaliana?
Olona maromaro eto amin'izao tontolo izao no miady amin'ny enta-mavesatra napetraka eo an-tsorony.
Ny fanomezana prong roa an'ity fanontaniana ity dia mamela ny mpihaino hisafidy ny làlana izay mihatra aminy kokoa.
firy taona i eddie guerrero no maty
Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hiala iray raha fantatrao tsara ilay olona, ​​aza tsapanao fa handeha tsara io, na mety hanakaiky loatra ny foto-kevitra saro-pady.
Ny fahafantarana izay mitondra fiadanam-po na fifaliana ho an'ny olona dia afaka manampy amin'ny fandokoana ny sary mazava kokoa momba izay ankasitrahany.
Fanampin'izay, manome làlana hafa hanitarana ny resaka izy io.
Voajanahary ve? Tian'izy ireo ny mitsangatsangana na mitoby?
Ny biby fiompin'izy ireo ve? Inona no karazany? Naharitra hafiriana izy ireo?
Fotoana hiarahana amin'ny ankohonana ve?
Inona avy ireo karazana hetsika ankafizin'izy ireo? Lalao baolina ve izany? Misy labiera vitsivitsy ve? Angamba fandriam-pahalemana sy fahanginana minitra vitsy eo am-pijanonana eo amin'ny seza porselana, mamaky amin'ny findain'izy ireo.
Mety tsy ho zavatra sarotra be na sarotra izany.
7. Inona no hataonao amin'ny fiainanao raha tsy voafetra ianao?
Ny karazana valiny azonao amin'ity fanontaniana ity dia mety hanondro fanantenana, nofy ary tanjona ao amin'ilay olona iresahanao.
Izy io koa dia afaka milaza betsaka momba ny karazan'olona manao ahoana izy ireo.
Nifidy zavatra tsara sy tsara fanahy ve izy ireo? Misy zavatra tia tena? Misy zavatra hafahafa sa tsy fahita?
Anontanio, fa maninona no nisafidianany ilay zavatra nataony?
fomba hanampiana olona iray misaraka
Oh! Ary aza gaga amin'ny valin'ny 'fitoerana masina na famonjena.' Mahazatra io!
Ireto dia sosokevitra vitsivitsy fotsiny ho an'ny fanontaniana hanamorana ny resadresaka, fa ny fanontaniana tsy dia manandanja loatra toy ny mpihaino tsara sy mavitrika.
Tena tianao ve ny hisokafan'ny olona iray haneho anao hoe iza izy? Vonoy ny televiziona, esory ny telefaona ary esory ireo fanelingelenana.
Ataovy izay hifantohan'io olona io rehefa milentika ao ambanin'ny fiarahamonina ankapobeny.
Mety hiova tanteraka ny resaka rehefa mampifantoka ny sainao amin'ilay olona iray ianao, tazomy ny masonao , ary manoloa tsiky manasa.
Mamaly tsara ny olona rehefa maneho ny teninao fa miahy izay lazainy ianao.
Tsy ampy ny mametraka fanontaniana mety etsy sy eroa. Tsy misy te-hahatsapa ho toy ny eritreritra aoriana na hoe tsy mendrika hifantohana izy ireo!
Ary miomàna hamaly ny fanontanianao amin'ny namanao vaovao.
Ny resadresaka mifampitohy sy mifampiandany dia manome ny fahatsapana fa tsy miraharaha akory ianao hampivelatra ny fisakaizana mahasoa sy mahasoa.
Ny fananganana finamanana salama dia mitaky fahalemena eo amin'ny olona. Raha tsy izany, ny fanontaniana rehetra hahafantarana olona iray dia mety hianjera satria tsy misy fahatsorana kely.
inona no atao hoe marivo rehefa mamaritra olona
malaza tononkalo momba ny fitiavana sy ny fahafatesana
ohatrinona ny toerana homena azy
signe ny mpiara-miasa taminy dia tsy liana
ny fiainana dia toy ny tononkalo amin'ny boky